अस्पताल बाट तिन करोड नेपालीलाई पाईलट विजय लामाको सन्देश!( भिडियो सहित),हेर्नुहोस।😓 – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
अस्पताल बाट तिन करोड नेपालीलाई पाईलट विजय लामाको सन्देश!( भिडियो सहित),हेर्नुहोस।😓
को,रोना भाइरस सं,क्रमणको पुष्टि पछि स्टार अस्पताल सानेपामा उपचारथ रहेका नेपाल एयरलाईन्सका सिनियर क्याप्टेन विजय लामाले कोरोना सं,क्रमणलाई सामान्य नठान्न आग्रह गरेका छन्। तिन करोड नेपालीलाई एक भि,डियो सन्देश जारी गर्दै लामाले को,रोना सं,क्रमणलाई सा,मान्य रुपमा नलिन सबैमा आ,ग्रह गरेका हुन्।
को,रोनाको विषयमा ला’प’र’वा’ही नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। को,रोनालाई हल्का रुपमा नलिन र आफ्नो सुरक्षामा नचुक्न समेत उनको सुझाव छ र सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। को,रोना स,ङक्रमण देखिनु अगाडी वाईडबडीबाट नेपाली सेनालाई शान्ति मिसनमा पुर्याउन गएका थिए।
क्याप्टेन विजय लामाले फेसबुकमा ले,खेका छन्,“मेरो वि,नम्र अनुरोध सबैमा बिन्ती छ। यो को,विडलाई हल्का नलिनु होला । आफ्नो सुरक्षामा कतै नचुक्नु होला । यो सामान्य रो,ग होइन । यसले ज्या,न लिन सक्छ। करिब २ हप्ताको उपचार पश्चात आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सु,धार आएको पनि उनले जानकारी गराएका छन्।
उनले भनेका छन र,गतको नमूना पनि लगेन, नास्ता पनि खाइयो, कमजोरीपनको कतै लक्षण छैन। राति निन्द्रा पनि राम्रै लाग्यो, डाक्टर साबको भनाइ अनुसार मेरो इ,न्फेक्सन लेभल पनि घटेको अवस्था छ।आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको पछाडी यसभगवान समयका भगवान डाक्टरहरुको हात रहेको भन्दै धन्यवाद पनि दिएका छन्।
विजय लामाले सङक्रमन थाहाँ नपाउदा सम्म दौडधुप गरिरहेका थिए नेपाली सेनालाई दक्षिण कङ्गो पुर्याएर अाए पनि उनलाई को,रोना पोजेटिभ देखिएको थियो बाँकी उनको भिडियो हेरौ र उहाँको सुझावलाई अात्मासाथ गरौ स,चेत बनौ। भिडियो:
Previous जलमाफियाले कुलमानलाई यसरी फसाएका हुन् भन्दै वरिष्ठ पत्रकार त्रीपाठीले गरे श’नसनीपुर्ण खुलासा !
Next वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको आँखा नि’कालेको अ’फवाह भन्छ अस्पताल तर जनताले प’त्याएनन!